Global Voices teny Malagasy » Hong Kong: Mifanentana hiaro ny moron-dranomasin’i Tai Long Wan ny mponina · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 24 Jolay 2010 7:34 GMT 1	 · Mpanoratra Oiwan Lam Nandika zhhantar
Sokajy: Azia Atsinanana, Hong Kong (Shina), Fanoherana, Hafanàm-po nomerika, Mediam-bahoaka, Tontolo_iainana
Olona maro no mihevitra fa ala-tsimenitra no mandrafitra an'i Hong Kong noho ireo tranobe mijoalajoala ao aminy. Saigy ny zava-misy dia faritra tsy misy fivoarana ny 75 % n'ny velarantany amin'io tanàna io amin'ny ankapobeny. Endrika navelan'ny tantaran'ny fanjanahan-tany tsy niniana natao io, rehefa niezaka hampaharitra ny famatsiana rano tao an-tanàna tamin'ny alalan'ny fananganana siniben-drano maro manodidina ny tanàna ny governemanta Britanika taorian'ny Ady Lehibe Faharoa.
Ny rindrantsary hitantsika eo ambony no maneho ny topaza-maso 10 mahafinaritra indrindra ao Hong Kong : Ny moron-dranomasin'i Tai Long Wan. Hita any amin'ny ilany atsinanan'i valan-javaboarin'i Sai Kung io moron-dranomasina ara-boajanahary io ary an-tongotra ihany no ahafahana miditra ao. Na izany aza, tamin'ny 16 Jolay, nanambara ny gazety eo an-toerana, South China Morning Post, fa misy trano lehibe an'olo-tsotra eo andalam-panamboarana eo ambonin'i tanànan'i Sai Wan izay hita avy hatrany ao ambadiky ny morontsiraka. Ny mpandraharaha eo an-toerana i Simon Lo Lin-shing, talen'ny Mongolia Energy Corporation , no ao ambadik'ity fanorenana ity .
Namorona vondrona  haingana tao amin'ny facebook miantso mba hanao hetsika ny olom-pirenena mahatsapa ho voakasik'izany vantany vao nandre ny vaovao:
Sai Wan, Tai Long Wan indray no tafiditra farany amin'ireo lisitra maintin'ny fanapotehana ny endrika soa an'i Hong Kong. Ampy izay – “Naman'i Tai Long Sai Wan” isika, andao hataontsika ho farany amin'ny tolona ataontsika ity fijoroana ity mba hisian'ny fandaminana tsaratsara kokoa ny tanànantsika dieny mbola tsy tara loatra .
Tsy ampy herinandro akory, mpampiasa facebook mihoatra ny 65.420 no niditra tao anatin'ny vondrona . Nikarakara fitsangatsanganana teo amoron-dranomasina ireo mpikambana ao amin'ny vondrona tamin'ny 18 Jolay, ary niaraka tamin'ny ekpia tamin'izany ny mpananom-baovao eg9515 mpandray anjara ao amin'ny inmediahk.net, nifampitafa tamin'ny filoham-pokotanin'i Sai Wan, ary nitatitra  ny zava-misy:
Raha ny filazan'ny filoham-pokontany Atoa Lai, novidian'i Simon Lo ny tany fambolena sy ny trano fito mba hanamboarany toerana lehibe [Campus] manokana iray. Hisy tokotany kely filalaovana golf, fiantsonan'ny helikoptera ary dobo filomanosana ao. Milaza ity olona eo ho eo ihany amin'ny toe-batana ity fa mankeny an-toerana im-polo isan-taona Atoa Lo raha be indrindra .
Mponina iray hafa no niteny fa nopotehana hanaovana trano lafovidy ireo trano efa niorina ela tao tanàna. Ity ambany ity misy horonan-tsary nalain'i eg9519 izay mampiseho ny 100 000 “pieds” hanaovana ny fanorenana sy ireo fiarabe mpitrongy tany efa tonga ao:
Ny tsy nampoizin'ny rehetra, dia nahatsikaritra ny mpiserasera iray tao anatin'ny vondrona tamin'ny 20 Jolay, raha nijery (tamin'ny alalan'ny tatitr'i eg9515)  fa toerana arkeolojika nisy rano voaaron'ny akorandriaka fahagola io toerana anaovana fanorenana io. Nambaran'ny tranonkalan'ny fampahalalana ara-jeografikan'ny governemanta (antontan-taratasy laharana AM78-0214) fa efa voapetraka nandritra ny taompolo 80 sy tamin'ny taona 2006 ny lanjan'ny [vidin'ny] ity toerana arkeolojikan'i Sai Wan ity, nahita ireo siny maro tamin'ny vanim-potoana Neolitika tao amin'ny tanàna ambonin'i Sai Wan ny mpikaroka momba ny fitaovana fahagola. Ity no tatitry  ny fitondrana ary ity ambany ity ny sary nopihana tamin'ny efijery manondro an-tsarintany ilay fari-drano voaaron'ny akorandriaka sy ny toerana anaovana fikarohana ny navelan'ny fahagola :
Nandray anjara tamin'ny fifampitafana ity, rehafa nahazo mailaka avy amin'ny mpikambana ao amin'ny vondrona Facebook izay mangataka soso-kevitra ny manam-pahaizana momba ny tontolo iainana, i C.Y Jim avy any amin'ny Departemanta ara-jeografian'i faritr'i Hong-Kong . Ity ambany ity ny heviny mikasika io tranga io :
(1) Na dia an'olon-tsotra tsy miankina aza ny tany, izany hoe mamboly sy miompy ihany no azo atao eo. Mila ny fankatoavan'ny governemanta ny fanaovan-javatra ankoatra ny nampiasana azy voalohany. Tafiditra ao anatin'ny fanaraha-maso amin'ny fampiasana ny tany tao tao anatin'ny Fanjakan'andriamanjaka [britanika] ( famelana fampiasana tany avy amin'ny fanjakana raha amin'izao fotoana izao) izay nandidiana ny tantsaha rehetra taorian'ny nandaozan'ny britanika vao tsy ela ny resaka fifanarahana momba ny tany. Ny departemanta momba ny tany no masoivohon'ny governemanta miandraikitra ny fampiharana ny fanaraha-maso ny fampiasana ny tany .
(2) Tsy misy ifandraisan'ny amin'ny asam-pambolena ny fanamboarana dobo ( ho amin'ny tanjona fakan'aina na fampitaovana fa tsy ho fiompiana hazandrano), noho izany, tokony heverina fa fampiasana ny tany tsy ara-dalàna izany .
(3) Mila ny fankatoavan'ny Departemanta momba ny tany ny fananganana ireo trano ampiasain'ny olon-tsotra izay mifandray mivantana amin'ny famokarana aram-pambolena. Azoko mihitsy fa afaka havaozina tsara ireo tranokely misy eo fa saingy voafehin'ny [tsy mahazo mihoatra] zaridainam-boninkazo kosa sy ny lanjany[vesany amin'ny toerana]. Mino aho fa tsy misy izany tranokely izany teo aloha na ireo fanorenana hafa , noho izany, tsy manana zo ny hanao trano eo ny tompony vaovao .
(4) Ny drafitry ny fari-mpambolena tamin'ny taona 2006 no mandrakotra ny mifampihorirana ny morontsirak'i Tai Long Wan. Nambara ho ao anatin'ny Faritra Arovana indrindra io tany fambolena io, ary nofaritana ho Toerana manokana mahaliana ara-tsiantifika (SSSI) ny ampahan'ny tany eo akaikin'ny moron-dranomasina. Nofaritana ho tanàna ao anatiny (V) ireo tanàna roa misy, antsoina hoe Ham Tin sy Tai Long. Mazava ho azy fa hiaro ny zava-boahary amin'ny mety ho fanakorontanana tsy misy dikany na fanelingelanana hafa no tanjon'ny drafitra. Manana endri-tany mitovy sy iray tantara amin'ny fomba nampiasana ny tany ireo toerana voatonona ireo . Mitovy sy mifampitohy ny fiarovana ireo faritra ireo. Noho ny tsy firaharahiana na ny fanadinoana no nahatonga ny faritra voakasika eto ho tsy voaaron'ny drafi-piarovana ny tany fambolena.
(5) Raha mikasika ny hoe hitady taratasy fampiatoana avy amin'ny fitsarana hanajanonana ny asa indray, mino aho fa manana fahefana ny governemanta ny hampiato azy ity ary tsy mila manaraka ny fombafomba fanao amin'izany. Fa tena resaka hafa mihitsy koa hoe mazoto ny hanao izany ve ny governemanta. Raha mandà ny hanao izany ny fanjakana dia manahy aho fa mila manao ny dingana hahazoana ny taratasy fampiatoana ny fokonolona . Ny zavatra tena mampalahelo dia mbola mitohy ny asa fanapotehana raha toa kosa ka mbola mijery ireo hetsika afaka tokony atao ny fitondrana .
Miantso amin'ny fanaovana fitarainana amin'ny alalan'ireo fampielezan-kevitra amin'ny mailaka  sy antso an-tariby  ireo mponina amin'ny aterineto , mba hanerena ny governemanta hampiato ny tetik'asa. Nanao dingana ihany tamin'ny farany ireo departemantan'ny governemanta ary nanome fampitandremana amin'ny fanamboarana . Niteny tamin'ny haino aman-jery matanjaka i Mr. Lo androany fa haatony ny fanamboarana .Hatramin'ny nisian'ny loza izay naneho ny lesoka amin'ny rafitra eo an-toerana izay saika nanimba ny zava-boahary manodidina, dia nanohy ny nanao antso maika ny governemanta hamoaka lalàna sy tokony hanana ny fijerena azy manokana sy ankatoavin'ny departemantan'ny tontolo iainana ny fangatahana ireo drafitry ny fanamboarana manakaiky ireo faritra misy ny toerana fitahirizan-java-boahary ireo mpanao laàna eo an-toerana sy ire vondrona ara-tontolo iainana .
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2010/07/24/7590/
 raha nijery (tamin'ny alalan'ny tatitr'i eg9515): http://www.inmediahk.net/node/1007754
 tatitry : http://www.lcsd.gov.hk/CE/Museum/Monument/form/TPCST_Final_Report.pdf
 heviny mikasika io tranga io : http://www.facebook.com/topic.php?uid=119731658073048&topic=162
 antso an-tariby : http://www.facebook.com/topic.php?uid=119731658073048&topic=165